अक्सफोर्डले बनाएको कोरोनाको खोप नेपाल आइपुग्दा कति पर्ला ? – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारअक्सफोर्डले बनाएको कोरोनाको खोप नेपाल आइपुग्दा कति पर्ला ?
अक्सफोर्डले बनाएको कोरोनाको खोप नेपाल आइपुग्दा कति पर्ला ?
एजेन्सी । कोरोना भाइरसको म’हाव्यादीको ल’डाइमा सम्पूर्ण विश्व केन्द्रित छ । यहि बेलामा यस वि’रुद्धको खो’प परिक्षणमा सफलता पायो भने कोरोनासँग प्र’तिस्पर्धामा अर्को कुनै पनि उ’त्पादन हुँदैन । यस्तो अवस्थामा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट एउटा शुभ समाचार आएको छ । यस खोपमा मानव परीक्षण चलिरहेको छ र परीक्षणमा राम्रो परिणामहरू बाहिर आएको छ । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय खोप भारतमा पनि उत्पादन गरिने छ । कोभिड म’हामारीको बेला खो’प बनाउनु विश्वमा यसको आ’पूर्ति गर्नु ठूलो चु’नौती हुनेछ ।
अमेरिका र चीनमा पनि पनि मानव परिक्षणको काम भइरहेको छ अक्सफोर्ड भ्या’सीन स’मूहका निर्देशक एन्ड्र्यू जे पो’लार्डले भने । उनले भने, “हामी यो प्र’तिस्पर्धाको रूपमा होइन तर सा’मूहिक प्रयासको रूपमा देख्छौं । हामी विश्वका अन्य देशहरूमा कोभिडमा अनुसन्धानमा सं’लग्न व्यक्तिहरूसँग पनि आफ्ना अनुभवहरू शेयर गर्दछौं, ताकि हामी सँगै को’रोनासँग प्र’तिस्पर्धा गर्न सकौं।”ए’न्ड्र्यू पोलार्डले कोभिड खो’पको केहि दी’र्घकालीन सा’इड इ’फेक्ट हुनसक्ने उनले बताए । उनले भने, “त्यसपछि भ्या’क्सिनको क्वालिटी प्रभावित हुने छैन । यहाँ खोप बनाउने कुनै स’र्टकट तरीका छैन।“
क्लि’निकल परीक्षणहरू अझै पनि एक खो’प तयार गर्दा सामान्य दिनहरूमा जस्तै समान प्रक्रिया अन्तर्गत गरिदैछ । उनले भने, “हामीसँग लामो अ’वधिको डाटा उपलब्ध छैन। हामीले प्राप्त गर्न सक्ने एक मात्र लाभ यो हो कि पहिले पनि हामीले यस किसिमका खोप प्रयोग गरिसकेका छौं।”भारतमा यो खो’प उत्पादन हुने भएको छ ।भारतको पुनास्थित सीरम इ’न्स्टिच्यूट अफ इ’ण्डियाका सीईओ अ’दार पू’नावालाका अनुसार यो खो’प ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्ने छौं र यस हप्ता हामी खोपको लागि अनुमति लिने छौं ।पूनावालाले भने, “डिसेम्बरसम्म हामी ३००/४०० मिलियन डोज भ्या’क्सिन को’भिसिल्ट बनाउन स’क्षम हुनेछौं।
भ्या’क्सिनको लागतको बारेमा विश्वभरी नै चर्चाको विषय बनेको छ । यसको मूल्यलाई अहिलेको विश्वले नाफाभन्दा पनि मा’नवीय सं’वेदनशिलतालाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने आवज उठिरहेको छ । त्यस्सैले सुरुमा यसमा कुनै नाफा लिइने छैन । उनले भने, “भारतमा यसको मूल्य १००० रुपैयाँ भारु वा कम हुन सक्दछ । म’हामारीबाट अ’क्रान्त भइरहेका बेलामा खो’पको लागि माग धेरै बढी हुनेछ । यस्तो अवस्थामा हामीलाई यसको उत्पादन र वितरणका लागि सरकारी मेसिनरीको आवश्यकता पर्नेछ ।” भारतमा उत्पादन हुने उक्त खोप नेपालसम्म आइपुग्दा भारु सोहि मूल्यमा आइपुग्छ कि थप हुन्छ यो भने भाविष्यमा नै थाहा होला ।